सुनिल थापाको बिरोधको रोइलो : कांग्रेसमा पुरेत संस्कृतिको अन्त्य कहिले ? :: NepalPlus
सुनिल थापाको बिरोधको रोइलो : कांग्रेसमा पुरेत संस्कृतिको अन्त्य कहिले ?
नेपालप्लस राजनितिक संवाददाता२०७७ मंसिर २ गते ११:२२
काठमाडौं— राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका बरिष्ठ नेता सुनिल थापा नेपाली कांग्रेस दल प्रवेश गरेको ३ महिनामैं कांग्रेसका सहमहामन्त्री बनेका छन् । थापा प्रवेश गरेलगत्तै र अझ सहमहामन्त्री बनेपछि कांग्रेस भित्र छाएको राजनीतिक तरंग भने अनौठो छ । सुनिल थापाको प्रवेशपछि कांग्रेस भित्रको पुरातन प्रबृत्ति छताछुल्ल भएको छ । गिरिजा प्रशाद कोइरालाको ‘सबैको कांग्रेस’ स्लोगन पुरेत संस्कारमा हुर्किएको ठूलो समुहले मान्न तयार छैन ।
गत शुक्रबार सम्पन्न कांग्रेसको केन्द्रिय कार्यसमिति बैठकले थापालाई सहमहामन्त्री र थापासँगै कांग्रेस प्रवेश गर्ने प्रजातन्त्र पार्टीका अन्य ७ जनालाई केन्द्रिय सदस्य प्रदान गरेको थियो । सामान्य रुपमा हेर्ने हो भने यसरी पार्टी प्रवेश, फेरबदल वा दलगत हेराफेरि आफैंमा अनौठो कुरा होइन । तर, भर्खरै नयाँ पार्टी छिरेका एकजना पात्रलाई कांग्रेसजस्तो एतिहासिक दलले सहमहामन्त्री दिएपछि चौतर्फी राजनीतिमा उठेको बहस र तरंग भने उदेक लाग्दो देखिन्छ । सुनिलबहादुर थापाको एउटै कमजोरी भनेको उनी कुनै बखतमा ‘पंचै हो, यो देश बनाउने’ भन्ने ‘महापंच’ सूर्यबहादुर थापाका छोरा हुन् । योबाहेक अरु कुनै कुराको खोट उनमा देखिन्न । अर्को दुःख र दुर्भाग्यको कुरा के पनि हो भने सांसारिक ज्ञान, वाकपटुता, अंग्रेजी भाषा पकड र कुटनीति समेतमा यी छोरा–थापा जत्तिको अब्बल पात्र कांग्रेसभित्र पाउनै मुश्किल छ । यहि कारण रोइलो बढी नै सुनिएको हो । किनभने कांग्रेस भित्रको रामचन्द्र सोच अन्त्य नभए सम्म यो पार्टीले सुनिल थापा जत्तिको सृजनशिल ब्यक्तिलाई कुनै पनि हालतमा स्विकार गर्न सक्दैन ।
आज सत्ताघटक र राज्यमैं प्रमुख प्रतिपक्षी भनिएको नेपाली कांग्रेसमा सभापति शेरबहादुर देउवा आफ्नी सासु प्रतिभा राणा (राप्रपा नेता) को टोकियोमा रहेको राजदूत पद जोगाइ पाउनकै लागि नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षधर बनेर हिँडिरहेको बिडम्बना एकातर्फ छ । अर्कातर्फ कांग्रेसभित्र एकजना युवा भनिएका गगन थापाबाहेक अर्को ‘आवाज’ कसैको पनि सुनिएको छैन । तैपनि नेपाली कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्ष भनिरहनु पर्ने बाध्यता सबै सामु उस्तै छ । रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री भनिएका शशांक कोइराला र कृष्ण प्रसाद सिटौलाहरु आआफ्नै कोठरीमा मस्त छन । यिनलाई न त देशको चिन्ता छ न पार्टीको । यहिबेला सुनिल थापाको उदय चलचित्र ‘चिनो’का चरित्र अभिनेता सुनिल थापा ‘राते काईला’ को उदयजत्तिकै भयानक देखिएको छ । जसलाई कांग्रेसका तिनै नेताहरुले आफ्नो कोठरी माथिको आक्रमणका रुपमा लिएका छन् ।
उमेरले ६१ वर्षिय सुनिल बिगतमा राष्ट्रसंघीय निकायहरुमा मात्रै २ दशकभन्दा बढी उच्चपदस्थ बनेर नेपाल फर्किएका हुन् । सन् २०१२ बाट नेपाली राजनीतिमा प्रवेश गरेका थापा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आफ्नै बाबु सूर्यबहादुरको प्रतिनिधि–पात्र झैं उदाएका थिए । र, सन् २०१२ को संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा धनकुटाबाट निर्वाचित हुनासाथै आपूर्ती मन्त्री बनेका थिए । उनकै पालामा भारतसँग भएको बिभिन्न चरणको संवादपछि नेपालमा पेट्रोलियम पाइप लाइन बिस्तार गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थको शुल्क निर्धारण अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य एवं अनुपातमा नियमित प्रकृया ‘अटोमेटिक’ रुपमा हुन थालेको हो । एउटा आपुर्ती मन्त्रीको हैसियतमा दिल्ली आएपनि सिधै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, तत्कालिन विदेश मन्त्री सुषमा स्वराज र गृह मन्त्री राजनाथ सिंहसँग ‘चियागफ’मा पुग्न सक्ने हैसियत बनाएका थापा महापंच सूर्यबहादुरका छोरा भएर होइन कि, बरु उनको राष्ट्रसंघीय निकायबाट चिनिएको अन्तर्राष्ट्रिय छविका कारण थियो । हो, यहि कारण पनि गुट र पक्षधरता बनाएर आवाज चर्काइरहने कांग्रेसीजनलाई अपाच्य बनेको देखिन्छ ।
उसो त ‘पन्च र महापन्च’को छिनोफानो गर्ने हो भने रमेशनाथ पाण्डे जीवनकालभर पंचायतका हिमायती बने । अहिले बीपी कोइराला र कांग्रेसको रौचिरा गर्ने ब्याख्याता उनै बनेका छन् । पंचायतका सिद्धहस्त पारखीहरु प्रकाशचन्द्र लोहनी, पशुपति शमशेर राणा, बुद्धिमान तामाङहरु बहुदलीयकाल र गणतन्त्र अवधिमा समेत धेरैपटक मन्त्री बनिरहे । अर्का महापंच कमल थापा त शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली सबैका निम्ति ‘प्रियपात्र र परराष्ट्र मामलाका एकमात्र ज्ञाता’ झैं बने । यिनै थापाको पालामा नेपालले भारतीय नाकाबन्दीको चर्को संकट बेहोर्नुपरेको थियो । तर, यी र यस्ता पात्रहरुलाई अघि सारिएको अवस्थामा सबैजना तैं चुप मैं चुप बनिरहेका भेटिन्छन् । जबकि बिचार, भाषा, ज्ञान र पहुँचका आधारमा दह्रो पकड राख्न सक्ने सुनिलबहादुर थापाजस्ता पात्र देखा परे भने कांग्रेसमा तरंग उब्जिहाल्छ ।
बरु कांग्रेसमा पार्टीभित्र बुद्धि–विवेक र चेतना छ भने सुनिलबहादुर थापा मात्रै किन ? बाबुराम भट्टराईसम्मका पात्रलाई दल प्रवेश गराउनु बुद्धिमानी हुनेछ । हरेक पार्टीभित्र रहेका ‘क्रिम’ प्रतिनिधिलाई कांग्रेसभित्र सह्दयतापूर्वक भित्र्याउनु अर्थपूर्ण कदम हुनेछ । मौषम अनुसार चुनाव र सत्ताको न्यानो खोज्दै आउने–जाने टपरटुइयाँ पात्रलाई स्थान दिनुभन्दा आफ्नो बिचार र ज्ञानमा विश्वस्त सुनिल थापाजस्ता पात्रलाई कांग्रेसले स्थान दिनुपर्छ । अन्यथा अहिले झैं देउवा, पौडेल वा सिटौला गुटकै कलहमाझ कांग्रेस खिइदैं–खिइदैं आजको मजदुर किसान पार्टी वा जनमोर्चा बराबर मात्रै रहनेछ ।